ဗဟို & တောင်အမေရိက ပီရူး
by တိုနီ Dunnell
အဝါရောင်အဖျားရောဂါကူးစက်ခံရမှုခြင်အားဖြင့်ကူးစက်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ၏ပြင်းထန်မှုမျိုးကို Asymptomatic ကနေဆိုးဝါးမှနေကြပါတယ် - အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ရောဂါလက္ခဏာတွေပုံမှန်အားဖြင့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျွံသွားမည်, တုပ်ကွေးကဲ့သို့ဖျားနာ, ပျို့ခြင်း, နာကျင်မှုများပါဝင်သည်။ တချို့ကလူနာသို့သော်တစ်ဦးအဆိပ်အဆင့်သို့ရွှေ့ပါ။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောအသည်းပျက်စီးမှုနှင့်အသားဝါ, ဆိုးဝါးကျသပွေနိုင်သည့်၏ရလဒ်များကိုအဖြစ်အလေးအနက်ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
ကာကွယ်ဆေး၏တစ်ဦးကအဝါရောင်အဖျားလက်မှတ်ပီရူးသို့ entry ကိုများအတွက်မလိုအပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ မှစ. ခရီးသွားအစီအစဉ်များအပေါ် မူတည်. သို့သော်အချို့ကိုသင်ဇာတ်စင်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအီကွေဒေါနှင့်ပါရာဂွေးအဖြစ်အချို့သောနိုင်ငံများတွင်, (ထိုကဲ့သို့သောပီရူးကဲ့သို့) အဝါရောင်အဖျားဂီယာတစ်ခုအန္တရာယ်နှင့်အတူနိုင်ငံများမှရောက်ရှိလာသောလျှင်အဝါရောင်အဖျားလက်မှတ်ပြသရန်ခရီးသွားများအတွက်လိုအပ်သည်။ သင်တစ်ဦးခိုင်လုံသောအဝါရောင်အဖျားလက်မှတ်မပါဘဲထိုကဲ့သို့သောတိုင်းပြည်တွင်ရောက်ရှိမည်လျှင်, သင် entry ပေါ်မှာကာကွယ်ဆေးလက်ခံရရှိရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်, သင်အထိခြောက်ရက်ပတ်လုံးအဘို့အသီးသန့်ခွဲထားနိုင်ပါသည်။
ထောက်ခံအုကူံပသို့မဟုတ်လိုအပ်သောအဝါရောင်အဖျားကာကွယ်ဆေး (WHO က, 2015) နှင့်အတူနိုင်ငံပေါင်း၏စာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ
ပီရူးအတွက်အဝါရောင်အဖျားဂီယာ၏အန္တရာယ်နှင့်အတူတစျဒေသကနေအခြားမှကွဲပြားခြားနားသည် ပီရူးရဲ့သုံးပထဝီဒေသများ သိသိသာသာအခန်းကဏ္ဍကစားခြင်း။
အဆိုပါအန္တရာယ်အင်ဒီး (ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အကြံပြု) ၏အရှေ့ဘက်တောတွင်းဒေသတွေမှာအကြီးမြတ်ဆုံးပါပဲ။ အဆိုပါအန္တရာယ်အင်ဒီး (7,550 ခြေထက်, ဒါမှမဟုတ် 2300 မီတာ) ကုန်းနှင့်အင်ဒီး (ကာကွယ်ဆေးထိုးယေဘုယျအားအကြံပြုမဟုတ်) ၏အနောက်ဘက်မှတစ်ခုလုံးကိုကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တွင်အနိမ့်သည်။
သင့်ရဲ့ခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုလီမာ, Cusco, မာချူပီချူနှင့်အင်ကာ Trail ဖို့ကန့်သတ်လျှင်, သင်တစ်ဦးအဝါရောင်အဖျားကာကွယ်ဆေးထိုးမလိုအပ်ပါဘူး။
မြစ်ဝါဖျားနာကာကွယ်ဆေးကို Safe ဖြစ်သနည်း
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏အဆိုအရကာကွယ်ဆေးထိုးအဝါရောင်အဖျားဆန့်ကျင်အရေးအပါဆုံးကာကွယ်အတိုင်းအတာဖြစ်ပါသည်: "ဒီကာကွယ်ဆေးလုံခြုံတတ်နိုင်ပြီးအလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ပြီး, 30-35 နှစ်အထိသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအကာအကွယ်ပေးပုံရသည်။ "
အဝါရောင်အဖျားရောဂါကာကွယ်ဆေးမှဘုံဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုပျော့အဖျား, ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်အခြားတုပ်ကွေးကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာများပါဝင်သည်။ ပြင်းထန်ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုရှားပါးဖြစ်ကြသည်။
သငျသညျကာကွယ်ဆေးလက်ခံရရှိမတိုင်မီရှိစေခြင်းငှါမဆိုဓာတ်မတည်အကြောင်းကိုသင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။ ကြက်ဥ, ကြက်သားပရိုတိန်း, နှင့် gelatin အပါအဝင်ကာကွယ်ဆေးအမျိုးမျိုးအစိတ်အပိုင်းများမှပြင်းထန်သောဓာတ်မတည်နှင့်အတူလူတွေ, ဆေးထိုးမခံမယူသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ CDC ၏အဆိုအရ 55,000 ခန့်လူတစ်ဦးကာကွယ်ဆေးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပြင်းထန်မတည့်တုံ့ပြန်မှုလည်းတွေ့ကြုံရသည်။
ငါအဝါရောင်ဖျားနာကာကွယ်ဆေးထိုးအဘယ်မှာရှိ Get နိုင်သလား?
အဝါရောင်အဖျားရောဂါကာကွယ်ဆေး designated ကာကွယ်ဆေးထိုးစင်တာများမှာသာရရှိနိုင်ပါသည်။ အတော်များများကဒေသခံဆေးခန်းကာကွယ်ဆေးစီမံခန့်ခွဲရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ, ဒါကြောင့်သင်ကဆေးထိုးဘို့ဝေးလွန်းသွားလာရန်မလိုအပ်သင့်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်အမျိုးမျိုးသောဆေးခန်းရှာဖွေမှုများကိုအပါအဝင်ရှိပါတယ်:
သငျသညျကာကွယ်ဆေး (ကတစ်ခုတည်းဆေးထိုး) ရရှိထားပြီးတာနဲ့သင်တစ်ဦး "ကာကွယ်ဆေးထိုးသို့မဟုတ် Prophylaxis အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလက်မှတ်," စတဲ့အဝါရောင်ကဒ်အဖြစ်လူသိများပေးလိမ့်မည်။ အဆိုပါလက်မှတ်ခိုင်လုံသော 10 ရက်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်ဖြစ်ပြီး 10 နှစ်ကြာသက်တမ်းရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဒါဟာကာကွယ်ဆေးလက်ခံရရှိရန်အကောင်းတစ်စိတ်ကူးင် သင်ပီရူးကိုသွားမတိုင်မီ , ဒါပေမယ့်သင်ကပီရူးတှငျလညျးပွုပါပွီနိုင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံးအမျိုးမျိုးသောဆေးခန်းကာကွယ်ဆေးပူဇော် - တစ်ဦးဆေးခန်းလည်းရှိ လီမာရဲ့ Jorge ချားဗေ့စ်နိုင်ငံတကာလေဆိပ် (အမျိုးသားရေး်ရောက်မှုအတွက်Clínicaက de Sanidad Aérea,) ။
သငျသညျဆေးထိုးခံယူခြင်းမပြုမီ, သင်ကတံဆိပ်တုံးများနှင့်အဝါရောင်အဖျားလက်မှတ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားလာမှုအတွက်ခိုင်လုံသော) ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုပါ။
ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာန: "အဝါရောင်ဖျားနာ;" မာကု Gershman, ဂျေ Erin Staples
မာချူပီချူ၏ Romance အပေါ်အမြင့် Get
Coca လက်ဖက်ရည်နှင့်ကင်းအကြားတွင်အဆိုပါ Link ကို
အင်ကာ Trail နှင့်မာချူပီချူပိတ်သိမ်းပေါ်တွင်အချက်အလက်
Utah ရဲ့တန်ခိုးကြီး5ကိုယ်တော်၏ Bucket List ကိုအပေါ်ပိုငျအဘယ်ကြောင့်
သြစတြေးလျအတွက် Thong ၏အဓိပ်ပာယျ
Sunnymead အိပ်ရာနှင့်နံနက်စာ: Shimla အတွက်တစ်ဦးက gastronomic အတွေ့အကြုံ
မင်းသမီးသင်္ဘော - Cruise Line ကိုယ်ရေးဖိုင်
San Diego မှ Los Angeles မြို့ခရီးသွား Options ကိုမှ
သုံးသပ်ချက်: တက္ကဆက်ပြည်နယ် Travaasa Austin Spa
Fogo က de Chao Indianapolis အတွက်ရိုးရာဘရာဇီးစားနပ်ရိက္ခာကမ်းလှမ်း
မနီလာ, ဖိလစ်ပိုင်အတွက် NAIA လေဆိပ်အသက်ရှင်လွတ်မြောက်လုပ်နည်း
ဘယ်အချိန်မှာ RVing အချိန်ပြည့်သင့်ကလေးတွေက Homeschool လုပ်နည်း
မိသားစုများအတွက်ကလပ် Med All-Inclusive Resorts